Oggolaanshaha Hore - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Ogolaansho hore
Wax ka baro oggolaanshaha hore iyo maaraynta ka faa'iideysiga bukaanadaada 'CHPW'.
Dib-u-eegista Oggolaanshaha Hore waa habka dib-u-eegista adeegyada caafimaadka, qalliinka, iyo caafimaadka dabeecadda qaarkood iyadoo la raacayo shuruudaha la dejiyey ama tilmaamaha si loo hubiyo baahida caafimaad iyo ku habboonaanta daryeelka la buuxiyo ka hor inta aan adeegyada la bixin.
Waxaan isticmaalnaa oggolaansho hore, dib u eegis isku mid ah, iyo dib-u-eegis si loo hubiyo habboonaanta, baahida caafimaad, iyo waxtarka adeegyada daryeelka caafimaadka, habraacyada, iyo tas-hiilaadka la bixinayo. Tan waxaa loo yaqaanaa maaraynta isticmaalka.
Guddiga Warbixinta Bixiyaha
Habka Lookup Code Nidaamka
Liisaska Ogolaanshaha Hore iyo Tilmaamaha Isticmaalka
Adeegyada Caafimaadka & Qalliinka
Dawooyinka si xirfadaysan loo maamulo
Adeegyada gurmadka uma baahna oggolaansho hore
Adeegyada gurmadka waxaa lagu qeexaa sida soo socota.
Maskaxda: Markuu bukaanku khatar ku yahay naftooda, kuwa kale, ama uu si weyn u naafo yahay.
Caafimaadka: Xaalad caafimaad oo leh calaamado deg deg ah oo darxumo ku filan oo maqnaanshaha daryeel caafimaad oo degdeg ah ay sababi karto in la dhigo caafimaadka qofka ama, marka loo eego haweeneyda uurka leh, caafimaadka naagta ama canuggeeda uurka ku jira, qatar weyn, ama halis ah cillad xagga jidhka ah ama cillad daran oo ka timaadda xubin jidhka ah ama qayb ka mid ah.
Isbitaalada bukaan-jiifka iyo barnaamijyada bukaan-socodka ee xoogga badan, ogeysiis ayaa loo baahan yahay.
Cusboonaysiinta Oggolaanshaha Hore ESHB 2642
Fadlan hoos ka eeg hagitaan dheeri ah ESHB 2642 waxay ogolanaysaa oggolaansho hore oo ikhtiyaari ah (PA) ee gelitaanka deegaanka iyo sidoo kale maaraynta ka bixida isticmaalka cilladda isticmaalka mukhaadaraadka.
Daawaynta ciladaha Isticmaalka Walaxda daganaanshaha (SUD), labada maalmood ee ugu horreeya ee shaqada, marka laga reebo maalmaha fasaxa ah iyo fasaxyada Gobolka WA, si toos ah ayaa loo daboolaa, sidaa darteed oggolaansho hore ayaa oggolaan doonta muddada intaas ka dib.
Maareynta ka noqoshada, saddexda maalmood ee taariikheed ee ugu horreeya si toos ah ayaa loo daboolayaa, sidaas darteed oggolaansho hore ayaa oggolaan doonta muddada ka dambeysa.
Oggolaansho kasta oo hore oo la oggolaado waxay noqon doontaa maalmo ka dib muddada lacag-bixinta hore ee loo baahan yahay. Tusaale: RTF, PA 5 maalmood waxay ka dhigan tahay 5 maalmood ka dib bilawga 2da maalmood ee shaqada marka wadar ahaan 7 maalmood lagu bixin doono qorshaha & qalabka caafimaad ee ay bixiso bixiyaha gudbinta ee helaya PA wuxuu u baahan doonaa inuu taageero baahida caafimaad heerka daryeelka la codsanayo 5taas maalmood ee hore loo sii oggolaaday.
Waxaan doorbideynaa inaad kubixiso ogolaansho hore adoo u maraya Boggeena Maareynta Daryeelka (JIVA). Adoo adeegsanaya bogga, waad hubin kartaa u-qalmitaanka iyo heerka oggolaanshaha, daabacaadda waraaqaha oggolaanshaha, iyo codsiyada ku soo gudbi khadka tooska ah 24/7. Arimaha diiwaangelinta ama kaalmada farsamada kala xiriir Portal Support oo ah [emailka waa la ilaaliyay].
Marxaladda 2 Foomka Codsiga Qalliinka Bariatric
Macluumaadka Ogolaanshaha Hore
Nges 2022 Isbedelada Oggolaanshaha Hore
Nges 2021 Isbedelada Oggolaanshaha Hore
Nges 2020 Isbedelada Oggolaanshaha Hore
Shuruudaha Guud iyo Diidmada
Adeegyada loogu talagalay barnaamij gaar ah waxaa laga yaabaa inaysan noqon wax faa'iido ah. Fadlan ka hubi khadka tooska ah adoo maraya CaafimaadkaMAPS, la xiriir Adeegga macaamiisha, ama la tasho Daryeelka la maareeyay iyo Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Kaliya Shabakadaha Macaashka Xubinta.
Bixiyeyaasha Dalbanaya DME
Codsiyada DME waa inay lasocdaan saxiixyada dhakhtarka. Waxyaabaha ka reeban shuruudahan oo ay dalban karaan ARNP iyo PA-C waa:
Sahayda iyo qalabka lagama maarmaanka u ah ama gacan-siinta maamulka dawooyinka ama kormeerka waxtarka, oo ay ku jiraan kormeerayaasha gulukoosta ama bambooyin insulin / kormeerayaasha gulukooska ee joogtada ah
Qalabka neefsashada iyo qalabka lagama maarmaanka u ah ama gacan-siinta maamulka ama kormeerka daawooyinka, oo ay ku jiraan oksijiinta, nebulisereyaasha iyo kala-soocyada
Dawo kasta oo aan ku qorneyn liiska dawooyinka waxay u baahan doontaa ogolaansho hore.
Tufaax Health (Medicaid) Formulary
Dukumiinti looga baahan yahay in lagu taageero go'aan gaarista
Fadlan keen dukumiintiyo leh codsi lagu taageerayo baahida caafimaad. Tusaalooyinka dukumintiyada habboon waxaa ka mid ah:
Taariikhda hadda jirta iyo / ama baaritaanka takhtarka ee xallinaya dhibaatada iyo baahida loo qabo adeegyada la codsaday. "Xilligan" waxaa loola jeedaa lixdii bilood ee la soo dhaafay, ama dhawaanahan waxay kuxirantahay xaaladda.
Macluumaadka kale ee muhiimka ah
CHPW waxay u baahantahay ogeysiis dhamaan ogolaanshaha bukaan socodka, qorsheysan oo deg deg ah, 24 saac gudahood ama maalinta xigta ee shaqada.
Dhammaan oggolaanshaha la qorsheeyey waxay u baahan yihiin oggolaansho hore.
Xaddidaadda dheefaha iyo caymiska
Liiskan Oggolaanshaha Hore ma aha mid loo wada dhan yahay. Fadlan tixraac Buugga Tilmaamaha Biilasha Bixiyeyaasha HCA iyo / ama Jadwalka Khidmadda.
Ka gaabinta helitaanka oggolaanshaha hore ee loo baahnaa waxay sababi kartaa sheegasho la diiday. Adeegyadu waxay ku xiran yihiin caymis faa'iido, xaddidaadyo, iyo ka-reebis sida lagu qeexay tilmaamaha caymiska qorshaha.
Fadlan tixraac Qalabka raadinta Koodhka Oggolaanshaha Hore wixii faahfaahin dheeraad ah ee adeegyada ku taxan.
Sidee CHPW u Go'aamisaa Oggolaanshaha Hore
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington iyo adeeg bixiyayaasheeda waxay adeegsadaan tilmaamaha daryeelka ee ay qoreen khubarada dhanka daawada iyo caafimaadka habdhaqanka. Tilmaamahan waxay ka caawinayaan bixiyeyaasha inay ogaadaan goorta ay isticmaalayaan daaweynta qaarkood iyo dhibaatooyinka ay tahay inay iska fiiriyaan. Si aad u codsato nuqul ka mid ah shuruudaha loo isticmaalo go'aan qaadashada, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha ee 1-800-440-1561 (TTY: Garaac 711) laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
Kheyraadkaani waxaa ka mid noqon kara Tilmaamaha MCG, Go'aaminta caymiska Medicare, iyo Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington dukumiintiyada shuruudaha caynsanaanta daaweynta.
Shaqaalaha Caafimaadka ee Beesha ee Washington ayaa diyaar u ah inay ka wada hadlaan nidaamkan. Qiimeeyaha asaaga ah ee ku haboon (agaasime caafimaad, farmashiistaha, ama agaasime caafimaad oo la shaqeeya) ayaa loo heli karaa inuu kala hadlo wixii ogolaansho ama diidmo ah 1-800-440-1561 (TTY: Garaac 711).